फिल्ममा महिलाकाे शक्ति देखाएँ, अब क्रिकेटमा देखाउँछु: रेखा थापा
फरकधार / १९ चैत, २०७५
तस्वीर: रेखा थापाकाे फेसबुकबाट ।
रेखा थापालाई आजभोलि एउटा कुराको चिन्ता थपिएको छ । फिल्म कस्तो खेल्ने, कस्तो बनाउने भन्ने ‘हिम्मतवाली’ निर्णय गर्ने रेखामा अहिले थपिएको चिन्ता हो— नेपाली नानीहरु सुरक्षित भएनन् । नेपाली नानीहरुले अक्षर चिन्न पाएनन्, निकै पछाडि परिरहे । यही चिन्ता बोकेर केही गर्छु भन्ने आँट र साहस जुटाएर उनी फिल्मी सेटबाट केही बाहिर निस्किन थालेको अब केही वर्ष भइसकेको छ ।
त्यही साहस, आँट र हिम्मतको नतिजा हो– रेखाको अभियानः छोरीका निम्ती स्वर्णीम नेपाल महाभियान । यो महाअभियानलाई अझ फराकिलो बनाउँदै लैजाने पक्षमा छिन् रेखा । फलस्वरुपः उनले किनेकी छिन्— काठमाडौं सुपर च्याम्पियन्स ।
काठमाडौं सुपर च्याम्पियन्स एउटा महिला क्रिकेट क्लब हो जो यही वर्ष देखि सुरु भएको छ । ७ वैशाखदेखि विराटनगरमा हुने नेपालकै पहिलो महिला क्रिकेट टि २० मा यो टिमसँगै अरु तीन टिम पनि खेल्दै छन् । यो टिमका लागि रेखाले ५ लाख ७० हजार लगानी गरिसकेकी छिन् ।
प्रश्न उठ्छ, फिल्ममा रमाइरहेकी रेखाले किन क्रिकेटमा हात हालिन् ?
ब्याट र बल, ओभर र इनिङसँग खासै परिचित नभएकी रेखासँग यो प्रश्नको सहज जवाफ छ, ‘नेपालका महिलाको मनोबल बढोस् भनेर ।’ झन्, पहिलो पटक हुन लागेकाले पनि रेखा यसमा आफू सहभागी हुनै पर्छ भन्ने सोचमा पुगिन् ।
उता, भारतमा अहिले इन्डियन प्रिमियर लिग चलिरहेको छ । लिगमा समावेश केही टिम बलिउडका नामी कलाकारका छन् । के त्यसैको सिको गरेर क्रिकेट टिम किनेकी त होइनन् रेखाले ?
‘होइन, म कुनै पनि व्यावसायिक मोटिभबाट अभिप्रेरित छैन,’ रेखाले जवाफ दिइन्, ‘मेरो एउटै चाहना भनेको छोरीलाई समर्थन गर्नु हो, साथ दिनु हो । नेपाली छोरीलाई अझ बलियो बनाउनु हो । यसमा मेरो कुनै नाफाघाटाको हरहिसाब छैन, जोडघटाउ छैन ।’
एउटा त छोरीहरुसँगको निकटता पनि कारण हो, अर्को रेखाको नेपाली समाजप्रतिको असन्तुष्टि पनि हो । ‘बैंक वा कुनै कर्पोरेट हाउसमा एउटा नारीको सौन्दर्य बेचिएको छ,’ उनको स्वर अलिक कडा थियो, ‘छोरी भनेको बैंक, रक्सी र सौन्दर्यका प्रशाधनका सामग्रीको मात्र विज्ञापन गर्ने औजार होइनन् । त्यस्ता कुरामा मात्र उनीहरुमाथि लगानी गर्नु पर्छ भन्ने केही छैन ।’
यही सोच र नेपालमा चल्दै आएको प्रचलनलाई अन्त्य गर्न पनि रेखाले क्रिकेट टिम किनेकी हुन् । बरु रेखाको प्रश्न छ, ‘कुनै कामुक ब्राण्डको विज्ञापनमा राख्न तँछाडमछाड गर्ने लगाीकर्ताहरु किन छोरीको उत्थान हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् ?’
त्यसैले महिलालाई उपेक्षा गर्नेहरुलाई जवाफ दिन रेखाले क्रिकेट टिम किन्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
‘अब पनि हाम्रो समाजमा छोरीको हातमा डाडुपन्यू मात्र हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु भएन,’ क्रिकेटमा आफू लाग्दा आफ्नो ज्ञानको दायरा पनि फराकिलो हुने विश्वास लिएकी रेखा भन्छिन्, ‘फिल्मबाट त धेरै महिला पात्रलाई सशक्त र सबल भएको देखाएँ, अब क्रिकेटमा पनि देखाउँछु ।’
प्रकाशित मिति : चैत १९, २०७५ मंगलबार १७:२३:१३,